Ndeapi Mac Anofanira Kutenga? Kuenzanisa Iyo Nyowani Macs. - Mac
ndoitei kana foni yangu wont kuchaja
sei iphone yangu ichiramba ichibvunza password yangu
inogona mvura yakanganisa iphone inogona kugadziriswa
chikwama chiripi pa iphone
Ndeapi Mac Anofanira Kutenga? Kuenzanisa Iyo Nyowani Macs.
Iyo chechitatu Apple Chiitiko cha2020 ndichangopedza kutenderera, uye zvese zvaive nezveMac! Apple yakazivisa matatu matsva Mac komputa mamodheru, pamwe neyekutanga system pane chip (SOC) yakagadzirwa neApple. Nezvezviitiko zvese zvinonakidza, zvinogona kuve zvakaoma kuziva kuti ndeipi Mac nyowani yakakunakira iwe. Nhasi, ini ndichakubatsira iwe kupindura mubvunzo: 'Ndotenga Mac ipi?'
M1: Simba Rinodzora Chizvarwa Chitsva
Zvichida kukura kwakanyanya kunosanganisirwa mune yega yega Macs nyowani Chip M1, yekutanga komputa yekugadzirisa chip yeiyo nyowani Apple Silicon mutsara. Inoratidzira inomhanya kwazvo graphic kugona muSOC pasirese, pamwe ne 8-core CPU, iyo 5 nanometer M1 chip ndeimwe yezvinhu zvine simba kwazvo mukomputa yenguva dzese.
Apple inoti iyo M1 inogona kumhanya zvakapetwa nekumhanyisa mhanyisa seyepamusoro-ye-iyo-mutsetse PC chip, ichingoshandisa chete chikamu chechina chesimba muchiitiko ichi. Ichi chip chakagadzirwa zvakanaka kuti chiwedzere kushanda kweMacOS Big Sur, iyo software yekuvandudza inouya kuMacs neChina. Kana zvese izvi zvehunyanzvi zvekugadzira zvichikufadza, iwe unofara kuziva kuti iyo nyowani MacBook Air, MacBook Pro, uye Mac Mini zvese zvakagadzirwa neM1!
Yakanakisa Budget MacBook: MacBook Mhepo
Iyo yekutanga komputa Apple yakaziviswa nhasi Launch Chiitiko yaive nyowani MacBook Mhepo . Kutanga pa $ 999 chete, kana $ 899 yevadzidzi, iyo 13 ″ MacBook Air inoratidzira yakafanana isingaremi Wedge casing sekutanga kwayakaita, asi inovaka simba rakawanda kupfuura nakare kose.
Iyo MacBook Air inonzi inomhanya katatu kumhanyisa kwekukwikwidza maLaptops eWindows, uye inouya nekuvandudzwa kwekuchengetedza uye zvakanyanya kuwedzera hupenyu hwebhatiri rwekufambisa uye vhidhiyo kutenderera. Kutenda kune simba reM1 uye iyo P3 Wide Ruvara Retina Ratidza, vashandisi vanogona kugadzirisa mapikicha, mavhidhiyo, uye mifananidzo neasina kumboitika.
Imwe yesarudzo dzinonakidza Apple yakaitwa neMacBook Air nyowani ndeyekuti ivo vakabvisa zvachose fan, panguva imwe chete vachidzikisa huremu hwe laptop uye vachiibvumira kuti ishande zvakanyarara.
Iine Kubata ID uye yakavandudzwa ISP kamera, iyo MacBook Air yakanaka kune vasina kujairika vashandisi uye nyanzvi zvakafanana.
Yakanakisa Desktop Mac: Mac Mini
MacBooks yanga isiri iyo chete zvigadzirwa zvekugamuchira kumwe kutarisisa nhasi kweLaunch Chiitiko rwizi. Yechipiri nyowani chishandiso Apple yakaratidzwa nhasi yaive yakagadziridzwa Mac Mini . Kune vashandisi ve desktop, kwese, haudi kurara pane ino!
Iyo Mac Mini inochengetera imwechete M1 chip seMacBook Air, uye inokohwa zvakangofanana nezvakawanda kubva mukugadzirisa kwayo kugadziridza. Chizvarwa chitsva cheMac Mini's CPU inomhanya zvakapetwa katatu kupfuura iyo yapfuura modhi, uye inogadzira grafiki katanhatu kumhanya. Kuwedzera, iyo Mac Mini inomhanya pa kakapetwa kashanu kumhanya kwemakwikwi PC desktop , uye ine tsoka ye10% saizi.
Kana iwe uchifarira Mashini Kudzidza, iyi komputa yeNeural Injini yakaona kuwedzeredza kwekujekesa futi, inozadzikiswa-naka nemidziyo inotonhorera yakanyarara uye inoshanda. Mac Mini inotanga pa $ 699 chete.
Ehezve, desktop haina kushandisa zvakanyanya kune wepakati munhu asina kugona kubatanidza kune vekunze vatariri uye zvimwe zvishongedzo. Neraki, iyo Mac Mini inoratidzira akawanda mafekitori ekupinza kumashure kweayo casing, kusanganisira maviri USB-C madoko anoenderana neanotinhira uye USB4. Ichi chiitiko chinokoka kubatana kune matani ekumusoro resolution resolution, kusanganisira Apple yake ye6K Pro XDR yekutarisa.
Yakanakisa Ekumusoro-Kuguma Mac: 13 ″ MacBook Pro
Kwemakore, vateveri vehunyanzvi kwese kwese vakapemberera iyo MacBook Pro seyekupedzisira laptop mumutengo wayo wepakati. Mukupindura, Apple yatora mamwe matanho kuona kuti iyi komputa inochengetedza mukurumbira wayo uye inogara kumusoro kwemutambo unotakurika wemakomputa. Pinda iyo 2020 13 ″ MacBook Pro neM1.
Iyo MacBook Pro ine CPU 2.8 times nekukurumidza kupfuura yaakatangira uye Neural Injini inokwanisa gumi nerimwe nguva yayo Kudzidza kweMuchina kugona. Iyi komputa inokwanisa kutamba nekukasira 8K vhidhiyo yekutamba isina kudonhedza furemu, uye inomhanya nekatatu kumhanya kweiyo yepamusoro inotengesa PC imwe nzira.
Chimwe chinhu chinoshamisa cheMacBook Pro nyowani hupenyu hwayo hwebhatiri, hunogona kumira kusvika kumaawa gumi nemanomwe ekutsvaira zvisina waya uye maawa makumi maviri ekutamba kwevhidhiyo. Panyaya ye Hardware, iyi MacBook pro ine maviri anotinhira madoko, iyo ISP kamera ine yakadzama musiyano uye yakajeka gadziriso kupfuura nakare kose, uye mamaikorofoni ayo angangomira kumusoro mune yehunyanzvi kuridza studio studio.
Kutanga pa $ 1399, iine $ 200 dhisikaundi yevadzidzi, iyo 13 ″ MacBook Pro inorema 3 lb uye ine inoshanda uye inoshanda kutonhora sisitimu. Iyo casing, pamwe nekasi yeMacBook Air uye Mac Mini, inoumbwa ne100% yakashandiswazve aluminium.
Ndingatenga Rini Mac yangu Nyowani?
Kune chero munhu anoda kuwana maoko avo pakombuta yavo nyowani, haufanire kumirira kwenguva refu. Unogona fanozivisa zvese zvitatu izvi zvishandiso nhasi , uye yega yega ichave inowanikwa kune veruzhinji kutanga svondo rinouya!
Kana iwe uchida kuyedza MacOS Big Sur usati waita mari mukombuta nyowani, iyo nyowani software yekuvandudza ichave ichiwanikwa neChina, Mbudzi 12.
Yakagadzirwa Dhizaini, Isingaenzanisirwe Innovation
Tinovimba chinyorwa ichi chakakubatsira iwe kusarudza kuti ndeipi Mac yakakunakira. Imwe yeaya makomputa inoratidza kutanga kwenguva nyowani yezvigadzirwa zveMac, uye izvo zvaunogona kuita nechero ipi yemidziyo iyi zviri kwauri!
Ndeipi Mac nyowani yaunonyanya kufarira? Tizivisei mune zvakataurwa pazasi!